Kalluunka Shubunkin | Kalluunka
Kalluunka Shubunkin, oo laga tarjumay afka Jabbaan waxaa loola jeedaa casaan daran oo midabyo kale leh, waa mid ka mid ah noocyo kalluunka dahabiga ah ee caanka ah, oo caan ku ah hiwaayadleyda quraaradda iyo kalluunka biyaha qabow.
Shubunkin waa kalluun leh jir dheer oo dhuuban, ee midabada calico, taas oo ah in la yiraahdo isku dar ah madow, casaan, cadaan iyo jaalle. In kasta oo ay caadi tahay in la helo tijaabooyinka midabada midabada leh ee midabbada casaanka leh oo leh dhibco madow iyo midabbo leh, midabbo kala duwan oo buluug ah, in kasta oo aysan aad u badnayn in la helo.
Waxaa jira laba nooc oo Shubunkin Goldfish ah, ka London oo dabada ay ka tahay gaaban tahay iyo wax badan oo la mid ah golfishka guud iyo Bristol oo ah laba jibbaaran, oo dhammaadka wareegyada wareegsan la soo koobay. Noocyada kala duwan ee Bristol waxaa laga soo saaray England 1934, 50ka sano ee soo socotana shuruudaha qiimeynta ayaa la sifeeyay. Sikastaba xaalku ha noqdee, tijaabooyinka dadka waaweyni waa inay gaaraan ugu yaraan 7.5 sentimitir iyo ugu badnaan 15 cm.
Kalluunkani wuxuu leeyahay miisaan aad u fiican oo ku dhowaad hufan. Waa muunad leedahay midab weyn oo midabkeedu salkiisu yahay asal ahaan casaan leh midabyo kale.
Shubunkin Goldfish waa kalluun aad u adag in uma baahna daryeel gaar ahWaxay aad ugu adkeystaan ​​kala duwanaanta heerkulka iyo xaaladaha biyaha. In kasta oo ay u baahan yihiin in lagu keydiyo aquarium waaweyn oo lagu qalabeeyo meelo badan oo bilaash ah si ay ugu dabaalan karaan xasilloonida maxaa yeelay waa kalluun aad u firfircoon. Waxaa lagugula talinayaa inaad ku haysato aquariums-yada leh a Awoodda aan ka yarayn aquarium ka yar 100 litir.
Waxay la noolaan karaan Ph inta udhaxeysa 6,5 ilaa 7,5 iyo adkaanta udhaxeysa 10 iyo 18º. Xitaa waad gaari kartaa iska caabi heerkulka ka hooseeya 10º C, sidaa darteed waxaan u tixgelin karnaa inay ku habboon yihiin inay ku hayaan balli. In kasta oo taasi macnaheedu ahayn inaysan haysan ugu yaraan dayactir, haddaba waxaa lagula talinayaa inay leeyihiin shaandho.
Qir nooc kasta oo cunto ah waana mid ku habboon kuwa khibrad yar u leh daryeelka kalluunka dahabiga ah. Waad ogtahay intee ayuu kalluun noolaa noocan ah? Gali xiriirka aan hadda kaaga tagnay waadna ogaan doontaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » Aquarium-ka biyaha qabow » Aquarium biyo qabow » Shubunkin Goldfish
Xiisaha kalluunka Betta ama kalluunka Siam ee la dagaallama